Bixinta Warshadda Tayada Sare Triphenylphosphine oxide TPPO CAS 791-28-6 oo leh soo saare iyo alaab-qeybiye qiimo wanaagsan leh | Zhuoer
Triphenylphosphine oxide (inta badan loo soo gaabiyo TPPO) waa isku -darka organophosphorus oo leh qaaciddada OP (C 6 H 5) 3, oo sidoo kale loo qoray Ph 3 PO ama PPh 3 O (Ph = C 6 H 5). Dhismahan crystalline ee aan midab lahayn waa wax soo saar qashin caadi ah laakiin laga yaabo inuu waxtar u leeyahay falcelinta ku lug leh triphenylphosphine.
Barta dhalaalaysa 150-157 ° C (iftiin.)
Meesha karkarinta 360 ° C
cufnaanta 1,212 g/cm3
foomka Crystalline Powder ama Flakes
midabka Cad ilaa casaan-bunni
Muuqaal Ka saar budada kristaliin cad ama huruud ah
Nuxurka (GC) ≥98%
Luminta qalajinta ≤0.5 %
Okside-ka Triphenylphosphine (Orlistat USP Compound C) waa soo-saare u beddelaya aldehydes-ka 1,1-dichlorides. Triphenylphosphine Oxide waxaa loo adeegsadaa inuu yahay ka -shaqeeye isku -dubaridka si xoog leh u shaqeynayaα-CF3 γ-qiyaasaha.
Okside -ka Triphenylphosphine waa ligand fosfine oo loo adeegsado isku -darka falcelinta, dib -u -kicinta, iyo falcelinta Michael
Triphenylphosphine oxide (TPPO) waa dareeraha isku -duwaha ah ee loo isticmaalo in lagu dhaqaajiyo crystallization ee xeryahooda kiimikada. Waxaa loo adeegsaday codsiyada dib -u -habeynaya ololka, sida kaabiyaha dawaynta epoxy, iyo dhawaanahan, si loo soo saaro nanostructures.
Sideen u qaataa okside Triphenylphosphine TPPO CAS 791-28-6?
Hore: Daahirsanaanta Sare Steroids Nandrolone Decanoate CAS 360-70-3 oo leh qiimo wanaagsan
Xiga: Nadiifnimada Sare 98% Palmitoleic acid cas 373-49-9 oo leh qiimaha ugu fiican
Okside -ka Triphenylphosphine
Qiimaha Factory polybutadiene Hydroxyl-joojiyay ...
Nadiifnimo sare 99% Olivetol/3,5-hydroxypentylbenze ...